Litecoin ndiye - Blockchain News
Kukadzi 4, 2018 arun
Litecoin (LTC) akasikwa Charlie Lee, aimbova Google mushandi uye Ex-Mutungamiriri Engineering pa Coinbase. Litecoin ari forogo of Bitcoin Core yeGmail.END_STRONG rakabudiswa vachishandisa pachena-tsime nemhosva pamusoro GitHub. Litecoin yakabudiswa muna October 2011. Kwenguva refu, rakanga riri cryptocurrency wechipiri kubudikidza musika chivharo. Ndokusaka vanhu akaritumidza “digitaalinen sirivha.” Pari zvino, Litecoin anouya wechitanhatu, kurasikirwa kuti Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash uye Cardano. The musika chivharo iri $8.383.386.336, uye 1 LTC vakaenzana 0,01799050 BTC, kana $152,24. For gore 2017, mutengo akaita rocketed chimuka 1,250%.
The Litecoin samambure purogiramu kubereka 84 miriyoni litecoins, inova nguva mana zhinji mari dzakabatana sezvo bitcoin. Kufanana Bitcoin, Litecoin ari mined. Mumwe anogona kana kutungamirira kwavo voga asingashumbi kana kujoina Mumakore Mining tinogona chete vanoti izvi 3 makambani Hashflare, IQMining kana Genesis Mining. Kusiyana Bitcoin rayo SHA256, Litecoin anoshandisa itsanangudzo shanduro scrypt sezvo yaro uchapupu-of-basa hashing algorithm. waivako Its rinovimba zvikuru wekuenda yakawanda ndangariro.
Kazhinji vanhu vazhinji enzanisa Bitcoin kuti goridhe, vachiti zviri dzakanakira mubhizimisi nezvechisarudzo. Saka, Litecoin aigona kuonekwa mari-svikiro zvokutsinhanisa pamwe zvaida functionality. fungidzira chinogumbura rudzi nguva Litecoin ndiko 2.5 maminitsi ne 10 maminitsi Bitcoin, zvinoreva zvakawanda kwema panguva nokukurumidza chisimbiso nguva.
Uyezve, Litecoin akaita kusashanda zvakaparadzaniswa Witness (vakatevera) uye kutumirwa Mheni Networks (LN), izvo yekudyidzana hwakavandudzika samambure kuti chinzvimbo. Uye Atomic Swap zvemichina inoita Litecoin kuti vakatsinhanisa zvakananga nokuda Bitcoin, Ethereum, Vertcoin, uye Decred-blockchains kuti kushandisa mabhomba swaps.
ruzivo All ataurwa pamusoro vakatanga kuudzwa nezvechokwadi uye kuedzwa muna Litecoin Network. The chikwata anoramba achiedza kuti chigadzirwa chayo nani. Litecoin ndiye nokukurumidza uye kusanduka kupfuura Bitcoin, izvo ichiribvumira kuedza pfungwa itsva uye kuedza navo chaicho nokukasika.
Kubva dzangu pfungwa, Litecoin raMwari zvikuru-uye zvakakura-mukwikwidzi haina Bitcoin asi Zcash. Zvakanyorwa yakavakwa pamusoro Zerocash dzakati kuti inopa oga-kuchengetedza kwema. Zviri kusazivana kuti akaita Edward Snowden vabuda pakutsigira nokuda cryptocurrency, kuchipa “vanonakidza kupfuura Bitcoin kumwe.”
Uye kubva hwokugadzira divi, Litecoin ane zvose mikana kuva yakanaka cryptocurrency kuti chitoro transactions.There kuti hapana nzira Litecoin aigona outplay Bitcoin maererano kukurumbira. Asi sezvo cryptocurrency indasitiri dzinokura, shoma digitaalinen dzeEurope vachakwanisa kuwana kuzivikanwa.
murove, kutungamirira pose ...
Chinhu chikuru komiti iri A ...
bitcoinmisa chenigore kucheracryptocurrencylitecoinkucherasamambure
Previous Post:The itsva dzakati PHANTOM kuchaita kukwikwidzana Mheni Network
Next Post:deVere Group anotangazve cryptocurrency wokutengesera Anwendung